नेपालमा नौ लाख मात्र बेरोजगार ! - Nepali Nepse
नेपालमा नौ लाख मात्र बेरोजगार !
१५ बैशाख २०७६, आईतवार ०९:१५
मुलुकमा नौ लाख युवामात्रै बेरोजगार रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले एक वर्ष लगाएर गरेको तेस्रो नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०७४/७५ ले नेपालमा १५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर समूहको जनसङ्ख्यामध्ये नौ लाख आठ हजार व्यक्ति बेरोजगार रहेको देखाएको छ । जसमध्ये पाँच लाख ११ हजार पुरुष र तीन लाख ९७ हजार महिला छन् । बेरोजगारमध्ये बसोबासका आधारमा छ लाख ४० हजार शहरी क्षेत्रमा र दुई लाख ६८ हजार ग्रामीण क्षेत्रमा छन् ।
आज सार्वजनिक गरिएको सर्वेक्षणमा नेपालको बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत देखाएको छ । पुरुषको तुलनामा महिलामा बेरोजगारीको दर बढी रहेको पाइएको छ । पुरुषको र महिलाको बेरोजगारी दर क्रमशः १०.३ र १३.१ प्रतिशत छ । यसैगरी शहरमा ११.६ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा १०.९ प्रतिशत बेरोजगारी छ ।
सन् २०१७/१८ मा नेपालको श्रम शक्तिमा सहभागिता दर ३८.५ प्रतिशत रहेको छ । यो दर शहरमा ४१.७ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा ३२.९ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी पुरुष र महिलाको श्रम शक्तिमा सहभागिता दर क्रमशः ५३.८ र २६.३ प्रतिशत छ । रोजगार रहेको जनसङ्ख्यालाई हेर्दा सबैभन्दा बढी प्रदेश नं २ मा २०.१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम प्रदेश नं ३ मा सात प्रतिशत मात्र रहेको छ । प्रदेशअनुसार श्रम शक्तिमा सहभागिता दर सबैभन्दा बढी ४७.१ प्रतिशत प्रदेश नं ३ र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २७.३ प्रतिशत छ ।
सर्वेक्षणले १५.४ प्रतिशत औपचारिक रोजगारी र ८४.६ प्रतिशत अनौपचारिक रोजगारी रहेको देखाएको छ । रोजगारमा रहेको र तलब/ज्याला प्राप्त गर्ने औसत मासिक आम्दानी रु १७ हजार ८०९ रहेकामा पुरुषको औसत मासिक आम्दानी रु १९ हजार ४६४ र महिलाको औसत मासिक आम्दानी रु १३ हजार ३६० रहेको छ । पुरुषको तुलनामा महिलाले औसत ३० प्रतिशत कम तलब पाउने गरेका छन् । नेपाली महिलाले पुरुषको तुलनामा औसत मासिक रु पाँच हजार ८३४ कम कमाउने सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
नेपालमा श्रम केन्द्रित सर्वेक्षणका रुपमा पहिलो पटक सन् १९९८/९९ मा नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण भएको थियो । सन् २००८ मा दोस्रो तथा सन् १०१७/१८ मा तेस्रो श्रम शक्ति सर्वेक्षण गरिएको हो । तेस्रो सर्वेक्षणका लागि २०७४ असारदेखि २०७५ जेठसम्म तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको थियो । यस पटकको श्रम शक्ति सर्वेक्षण अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले श्रम तथ्याङ्क विज्ञहरुको १९ औँ सम्मेलनबाट पारित श्रम तथ्याङ्कसम्बन्धी अवधारणाअनुसार सञ्चालन गरिएको विभागले जनाएको छ ।